Kuunza Enterprise Analytics kuWordPress | Martech Zone
China, January 14, 2010 Chishanu, Mbudzi 2, 2012 Douglas Karr
Kwemwedzi mishoma yadarika, ndanga ndichishanda pachirongwa chepamusoro chakavanzika chinonakidza. Webtrends mutengi wangu watiri kubatsira naye kudzikisa mutengo pamutobvu, kuwedzera huwandu hwekushandurwa uye kugadzirisa kuvonekwa kwepamhepo (ndinoziva zvakajairika… asi vakomana ava vari mumusika unokwikwidza zvikuru!). Nenhamba yepamusoro yemabhizimusi emabhizimusi anoshandisa WordPress, zvaive nemusoro kuti Webtrends yaizopa chipiro chakabatanidzwa… saka takaivaka.
Iyo Webtrends plugin haisi yekungori diki plugin yekuwedzera yako analytics kodhi kune yako tsoka - izvo zvingadai zvakave nyore. Pane kudaro, takaunza Webtrends zvisingaite analytics mukati meiyo WordPress dashibhodhi!
Iyo purojekiti yaive nematambudziko! Nepo Webtrends API ndeimwe yeakanakisa andakamboshandisa (pusha bhatani mune yako Analytics app kuti uwane iyo API kufona!), kuyedza kupa yakasarudzika mushandisi interface inoenderana neWordPress yaive yakaoma asi ini ndinofunga isu takairovera. Pane peji rezvisarudzo kwaunozadza rako API ruzivo uye sarudza account yako…. uye iwe unomuka uye unomhanya!
Iyo dashibhodhi iri zvakare 100% Ajax inotyairwa kuona kuti peji rekutakura peji rinochengeterwa padiki. Wakave mufaro kushanda kuburikidza neWordPress 'Ajax yekuchengetedza modhi (kakunyomba ipapo, asi ini ndinoona kudiwa kwekuve neyakanaka!).
Kana uri Webtrends mutengi uye unoda kuyedza beta nesu, ndokumbira undizivise. Seva yako inoda kumhanyisa PHP 5+ neiyo cURL raibhurari inogoneswa kuitira kuti iyo API mafoni anogona kutorwa! Tichave tichitaura zvakawanda nezve iyo plugin pa Bata 2010!
UPDATE: Ndakanganwa kutaura izvozvo Ole Laursen akabatsira timu zvakare. Ole kutibatsira isu kunyatsobatanidza FLOT neiyo plugin. FOT yakavhurika-sosi jQuery yakavakirwa rich rich chart injini. Ndine hurombo kukanganwa kutaura Ole! Aive akanaka kushanda naye.
Tags: zvideowebtrends izwiWordpress plugin
Kugadzira uye Iconography mune Zvematongerwo enyika
Doug - izvi zvinotaridzika zvakanaka - zvakaitwa zvakanaka
ndingada kuedza plugin kana yava kuwanikwa
Jan 14, 2010 na3:08 PM
Thanks Paul! Zvainakidza… mukana wakawanda wekuenderera mberi nekusimudzira zvakare. Webtrends ine huru API, yakaita kuti zvive nyore. Chikamu chakaomesesa chaive kugadzira iyo inodyidzana charting (unogona mouseover mapoinzi). 😀
Basa rinoshamisa. Iyi dhizaini / mhinduro yakangwara kwazvo. Handisi kumirira kuti uedze.
Ndinoda kupa wordpress plugin yako kuedza. Ndine mablog akawanda. Gara uchifarira chimwe chinhu chitsva. Ini handisi mutengi asi ndakaona chinyorwa pablog yavo ichiti ndinogona kungodonhedza iwe comment pano kana uchida kuzviedza. Ingondizivisa.
Ini ndinonzi Vittorio,
Ini ndinoshanda muItaly kune ENEL kambani yemagetsi inobatana newebhutrends uye isu tingave tichifarira kushanda se beta bvunzo.
ndingaita sei izvi?
Ndinoda kutarisa plug-in kana ungave nemoyo wakanaka. Ndine vamwe vatengi vanomhanya WebTrends uye WordPress vangaida. Inowanikwa here kuti udhaunirodhe kumwe kunhu?
Izvi zvinonzwika zvakanaka. Ndine chirongwa chiri kushanda paWordPress chinodawo WebTrends, zvinoita here kurodha iyi plugin?
Izvi zvinotaridzika zvakanaka. Uchiri kutsvaga vanhu kuti vaedze beta plug-in? Ndinoda kuiedza pane yedu WordPress MU yekuisa.
Kubatanidzwa kunotarisa kuvimbisa zvikuru. Isu (pa ramboll.com) tinoda kukwanisa kuiedza. Isu tine mabloggi chete mukati mefirewall parizvino, asi tiri kutangisa ekunze mablog mukati memavhiki maviri. Pane kwatinokwanisa kudhaunirodha here, kana kuti wava pedyo nekuburitsa iyo yekupedzisira?
Izvi zvakanaka! Ndinoda beta bvunzo. Ndine akati wandei masaiti atinoteedzera newebhutrends.
Ndinonyatso kunakidzwa nekuverenga zvinyorwa zviri pablogi ino.Nyaya dzainakidza kwazvo.Ndinokoshesa ichi chinyorwa chinoshamisa
Hi Doug - Ndiri kufarira plugin yako. Uchiri kugadzira izvi? Iyo iri muWordPress plugin repository? Zvakaoma kutaura kuti ikozvino chinyorwa ichi chakamira sei sezvo pasina zuva, asi ini ndinovimba iyi ndiyo yazvino plugin yauchiri kutsigira. Chero ruzivo runobatsira - thanks in advance!
Heather, ndaona kuti ndiwe wakataura nguva pfupi yapfuura. Wakakwanisa here kuwana rumwe ruzivo nezve plugin iyi?
Doug, pane zvigadziriso pane iyi plugin? Isu tiri mukugadzira chimwe chinhu chakafanana, handizive kana urikuchipa pachena kana kutengeswa.
Sep 18, 2015 na12:38 PM
Kana iwe uri mugadziri weWordPress, ndinoda chokwadi kukuwedzera iwe semunyori uye ita kuti uitore!